Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Ben Godfrey Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Anyị Ben Godfrey Biography na-egosi Eziokwu banyere Akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, Ezinụlọ, Ndị nne na nna, Enyi nwanyị / Nwunye ka ọ bụrụ, Ndụ, Ndụ Nke Onwe na Net Net.
N'okwu ndị dị mfe, anyị na-ewetara gị njem ndụ ya, site n'oge ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye ama ama na egwuregwu ahụ.
Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ onwe gị sie ike, nke a bụ nwata ịbụ nwa na-eto eto tozuru etozu - nchịkọta zuru oke nke Ben Godfrey's Bio.
The Biography nke Ben Godfrey, ndị na-agba ọsọ nke England. Lee ndụ nwata ya na Akụkọ ya.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla maara nkwekọrịta ya nke £ 25 nde na Everton na nnyefe 2020 bụ otu n'ime azụmaahịa kasịnụ n'akụkọ ihe mere eme nke Canaries.
N'agbanyeghị otuto a, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-ama egwuregwu bọọlụ mara Godfrey's Life Story nke bụ ihe na-atọ ụtọ. N’atughi nnukwu nsogbu, ka anyi bido.
Ben Godfrey nwa akụkọ:
Maka ndị na - ebido Biography, ọ na - akpọ ezigbo aha Benjamin Matthew Godfrey. Ben bụ naanị aha otutu. A mụrụ ndị na-agba ọsọ Bekee na 15th nke Jenụwarị 1998 na ndị mụrụ ya, Mr na Mrs Alex Godfrey na obodo York, North Yorkshire, England
. Ben Godfrey gosipụtara na ọ bụ naanị nwa nne ya na papa ya nọchiri anya ebe a.
Theo Walcott Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu nke eziokwu
Ndị nne na nna na-ewepụta oge iji kirie egwuregwu ya. Nwere ike ịhụ njikọ chiri anya dị n'etiti Ben na Alex Godfrey, papa ya?
Afọ Na-eto Eto:
O doro anya na onye na-eto eto na-eto eto ji oge ọ bụ nwata na-ekpere arụsị Thierry Henry. Ee! O nwere nnukwu mmasị n'ịgba bọọlụ kemgbe ọ bụ obere nwa.
N'ihi nkwado nke nna ya na-egwu egwuregwu, Ben na-enwe obi ụtọ na bọl akwụsịghị mgbe ọ bụ naanị egwuregwu.
Ezigbo ezinụlọ Ben Godfrey:
N'ịbụ onye si n'ezinụlọ na-eme egwuregwu, ọ bụ ihe dị otú o kwesịrị na ndị nne na nna hụrụ egwuregwu n'anya kụnyere n'ime ya ịhụnanya maka egwuregwu ahụ mara mma. Ikekwe ị maghị na egwuregwu ịgba ọsọ na-agba ọsọ nke ọma na mkpụrụ ndụ ezinụlọ nke Godfrey.
N'ezie, nna ya, Alex Godfrey bụbu onye egwuregwu bọọlụ ịgba egwu egwuregwu. N'ihi nnukwu ego o ritere n'oge ọrụ ya, nwoke ahụ mere ka obere Ben, nwunye ya, na ndị ezinụlọ ya biri ndụ okomoko.
Onye agbụrụ Bekee nke agbụrụ agbụrụ sitere na mpaghara kachasị na-abụghị obodo mepere emepe (North Yorkshire) na England. N'ụzọ na-akpali mmasị, ebe obibi Godfrey bụ ihe dịka 328.1 kilomita dị anya site na London, ebe akara ngosi nsọpụrụ England kachasị mma (David Beckham) mụrụ.
Nke a bụ ebe ezinụlọ Ben Godfrey si. Ọ na-echeta mgbe niile ebe akụkọ ya malitere.
… Ebe O Si Bido bu ebe di uto maka njem nlegharị anya. N'ezie, a maara North Yorkshire maka Yorkshire Dales na North York Moors, nke bụ otu n'ime ebe kachasị mma England.
Ben Godfrey Bio - Akụkọ nke Football:
N'ịbụ onye tolitere na Yorkshire, onye na-eme n'ọdịnihu ga-enwe obi ụtọ iso ndị ọgbọ ya gbaa bọl mgbe ha gụsịrị akwụkwọ. N'oge ahụ, Godfrey na-egwuri egwu dị ka onye na-eti ihe ruo mgbe ọ bụ 12.
Fabian Delph Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
Obi dị m ụtọ, ọ matara na ewepụghị ya maka ọgụ. N'ihi ya, ọ lekwasịrị anya na-enwe mmetụta site n'azụ.
Mgbe Godfrey na-eto eto dị ka onye na-eto eto, ọ gara ụlọ akwụkwọ Archbishop Holgate, nke bụ ụlọ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ na agụmakwụkwọ.
N'ebe ahụ, ọ keere òkè na bọọlụ ụlọ akwụkwọ sekọndrị wee nweta nnabata site n'aka ọtụtụ ndị nkwado na ndị nkuzi.
Site na onyinye ya a na-apụghị ịgbagha agbagha, Godfrey chịkọtara ndị otu egwuregwu York na District U-13 iji merie 2011 English Schools 'FA Inter-Association Trophy.
Ben Godfrey Mmụta na ịrụ ọrụ- Nwatakịrị ahụ nyeere ndị ọgbọ ya aka inweta mmeri mbụ ya.
Ben Godfrey Early Life with Career na-arụ ọrụ:
Mgbe o gosipụtara nnukwu nkà na egwuregwu ahụ, ọtụtụ ndị na-egwu egwuregwu malitere iji soro ndị mụrụ ya kwurịta ọdịnihu ya.
Obi dị m ụtọ, Alex Godfrey na nwunye ya ruru nkwekọrịta ezi uche dị na York City FC. N'ihi ya, ha nwere nwa ha nwoke banyere otu ndị ntorobịa Minstermen na 2011.
N'ụzọ dị mwute, Ben Godfrey na-arụ ọrụ oge mbụ nwere ọtụtụ nsogbu na mgbada. Nke mbụ, ọ kpesaara nne ya na nna ya banyere otu sistemu nke York City na-adịghị mma.
Mgbe ahụ, nna ya gafere nnukwu nsogbu ka ọ sonyere Middlesbrough na njedebe nke 2011.
Ben Godfrey Biography - Roadzọ Na-ewu ewu Akụkọ:
N'oge na-adịghị anya nne ya tụrụ aro ka nwa ha nwoke soro ndị otu ọzọ mee ụfọdụ ule. N'ịkwado ndụmọdụ ya, nna onye na-agbachitere ya nwalere ma Leeds United na Sheffield Wednesday.
N'ụzọ dị mwute, klọb abụọ jụrụ Godfrey mgbe ọ dị nanị afọ 15. Nsogbu niile a mebiri ya ọ fọrọ nke nta ka ọ daa na football.
Agbanyeghị, olile anya ya maka ọdịnihu dị mma na bọl bịara pụta ka ọ nwetara ohere agụmakwụkwọ iji sonyere ndị otu U-15 nke York mgbe emesịrị.
Onye na-eto eto nwere nnukwu olile anya nke ga - eme nke ọma na bọl ebe ọ bụ 15.
Ben Godfrey Biography - Nnukwu Ihe Storyga nke Ọma Akụkọ:
N'oge na-adịghị anya, onye ọkpụkpọ ahụ ghọrọ onyeisi U-18 nke York mgbe ọ gbasịrị ọkachamara na mbụ na 17.
N'oge na-adịghị anya, ezinụlọ Ben Godfrey mere nnukwu mmeri ya ka ọ na-agafe ule obodo Norwich, soro ha maka nkwekọrịta afọ atọ na ọkara na 2016.
Site na Canaries, nwa anyị nwoke nyeere ndị otu ahụ aka inweta mmeri EFL Championship.
Okwu ya na-akọwa etu o si nwee obi ụtọ mgbe o nyeere ndị otu ya aka ibuli asọmpi ahụ.
Mgbe ọ na-egosi maka Canaries, onye na-agbachitere ya nwere ego mbinye ego otu afọ na Shrewsbury Town na Njikọ Otu. Site na nka ya dị ka onye na-agbachitere etiti, Godfrey dọtara uche nke onye nchịkwa Everton, Carlo Ancelotti.
N'ụzọ na-akpali mmasị, Ancelotti kpọtụrụ Norwich City ka ọ kparịta maka inyefe onye ọkpụkpọ ahụ. Dika akara aka gha enwe, Ben Godfrey kwadoro ihe ruru nde £ 25 na Everton na 2020.
N'ebe ahụ, ọ malitere mmekọrịta siri ike na ya Michael Keane - talent ọzọ na-ebili ngwa ngwa. Ndị ọzọ dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Ọ kwagara Everton mere ka ọrụ ọrụ ya dị mfe.
Ben Godfrey Nwanyị na Nwunye ka ha bụrụ:
Enwere naanị ọtụtụ ndị Fans ga-ekwenye na onye nchekwa etiti ekwesịghị ịlụ di ma ọ bụ nwunye mgbe ọ nwetachara nnukwu ihe ịga nke ọma.
Agaghị agọnahụ eziokwu ahụ bụ na ọmarịcha mma Ben yana ụdị egwuregwu ya ga-adọta ụmụ nwanyị ndị ga-eche na ha bụ nwunye.
N'ezie, oge ga - abịa mgbe ọ ga - eji ego ya rụọ ọrụ na mgbasa ozi.
Na Lifebogger, anyị kwenyere (na nnukwu ohere) na Ben Godfrey enweela nwanyị na ndụ ya mana ọ na-echere oge kwesịrị ekwesị iji kpughee ya.
N'ezie, anyị kwenyesiri ike na n'oge na-adịghị anya (ma ọ bụ na ọ ga-amaworị) gosipụtara ndị mụrụ ya enyi ya nwanyị mgbe ọ na-achọ ngọzi ha n'oge na-adịghị anya.
Ben Godfrey Ndụ Nke Onwe:
Kedu ihe na-eme ka ndị egwuregwu bọọlụ Yorkshire buru ibu? Nke mbu, o nwere ngwakọta nke àgwà zodiac Capricorn. O doro anya na Godfrey nwere ọgụgụ isi, nwee ịdọ aka ná ntị, na-eguzosikwa ike n'ihe ziri ezi. Dị umeala n'obi ya na-ebute aha ya ụzọ.
N'ezie, ọ bụ ya Fans nwere mmasị n'ihi àgwà ya na ma na pitch. E nwere oge mgbe Godfrey ga-anọdụ n'ọnọdụ ebe a na-achọ mma iji nwee ume ikuku na-enye ume ọhụrụ nke gburugburu. Maka ihe ndekọ ndị a, ọ na-amụmụ ọnụ ọchị mara mma.
N'ezie, ọ nwere ọchị ọchị mara mma. Kedu ihe nwere ike na-agbata ya n'uche ka ọ nọ ọdụ n'ọnọdụ mara mma dị otú ahụ?
Nnyocha nke ịkwụ ụgwọ ego Everton na 2021 na-ekpughe na Ben Godfrey nwetara obere ala karịa Theo Walcott. Site na ụgwọ ọnwa ya nke £ 4 nde (Jenụwarị 2021 Stats), onye na-eme ọfụma na-ebi ndụ okomoko.
Ọ nwere ụlọ mara mma na ụgbọ ala mara mma. Ọzọkwa, na afọ niile nke ahụmịhe ya dịka kpakpando bọọlụ, anyị emeela atụmatụ Net Net nke Ben Godfrey n'ihe ruru £ 3.5 nde dịka nke February 2021.
E nwetụ anya hụ ọmarịcha mma ụlọ nke ebe obibi ya. Ọ bụ nnọọ okomoko ile.
Ezinụlọ Ben Godfrey:
Nye onye na-egwu egwuregwu siri ike, ọ dịghị ihe dị mma karịa ịla n'ụlọ na iri ezigbo nri ochie nke mama ya.
Godfrey nwere mmasị na ncheta na oge ọ na-anọnyere ndị mụrụ ya. N’akụkụ a, anyị na-ewetara gị nkọwa gbasara onye ọ bụla nọ n’ezinụlọ ya.
Banyere Nna Ben Godfrey:
O doro anya na papa ya nyere ya onyinye kasịnụ ọ chọrọtụsị site na ikwere na ya. Nna na-azụ azụ bụ Alex Godfrey, onye bụbu onye ịgba egwu Rugby nke nwa ya nwoke gara n'ihu ibi nrọ nke ezinụlọ.
Mgbe njem Godfrey nke stardom ghọrọ ihe siri ike, ọ nwere Alex ka ọ na-achọ ya.
Zute Alex Godfrey, ọ bụ nna Ben. Hụ otú ọ dịruru ka nwata. Ugbu a gịnị ga-abụ ọdịiche afọ ha?
Banyere mama Ben Godfrey:
O nweghi okwu nwere ike ịkọwa ịhụnanya na-enweghị atụ nke nne ya gosiri ya kemgbe ọ bụ obere nwa.
N’ụzọ dị ịtụnanya, Godfrey ekwughi aha nne ya n’oge ọ bụla ọ gbara ajụjụ ọnụ. Otú ọ dị, okwu agbamume ya ahụwo ya n'oge ihe isi ike. Anyị na-eche na nne mama Ben Godfrey nwere ike ịbụ agbụrụ ọcha.
Ikekwe ọ bụ nne Ben Godfrey, onye na-abanyebeghị n'ìhè nke kpakpando ya.
Banyere ụmụnne nwanne Ben Godfrey:
Ka m na-ede Bio a, ọ nweghị ozi na-egosi ụmụnne ya ndị nwoke na ndị nwanyị. Ọ dị ka Ben Godfrey enweghị ụmụnne. Agbanyeghị, o nweela ọtụtụ ndị enyi ọ na-ewere dị ka ụmụnne ya.
Banyere ndị ikwu Ben Godfrey:
N'ịga n'usoro ọmụmụ nna nna ya, ọ nweghị ihe ọmụma banyere nna nna ya na nne nne ya.
N'ezie, ezinụlọ ya niile na-eme ihe ịga nke ọma na ụwa dị egwu nke football. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ dịghị ihe e kwuru banyere ndị nne na nna ya, ụmụnne ya, na ndị ikwu ya dị anya.
Ben Godfrey Eziokwu Eziokwu:
Iji kechie akwụkwọ akụkọ banyere ndụ, ebe a bụ eziokwu ole na ole gbasara ya ga-enyere gị aka ịmatacha akụkọ ndụ ya.
Eziokwu nke 1: Aha na-ezighị ezi:
Iji mee ka otu eziokwu dị mkpa pụta ìhè, ọ dịghị metụtara ya British Superbike kpakpando (Ben Godfrey) onye nwuru n’ihe mberede.
Mgbe ọ bụla a kpọtụrụ aha ya, enwere ndị Fans ndị mehiere ya ka ọ bụrụ onye ikwu nke ọgba tum tum pro nwụrụ mgbe ọ dị afọ 25 mgbe ọ nwụsịrị na Donington Park.
O doro anya na ha na-aza otu aha, ma ha abụọ dị iche iche nwere nkà na-enweghị atụ. RIP Ben Godfrey (R).
Eziokwu nke 2: Nkwụ ụgwọ ụgwọ ụgwọ na ụgwọ nke abụọ:
Mgbe ọ na-egosi Norwich, onye na-agbachitere ya na-eburu ụgwọ ụgwọ kwa afọ nke £ 489,000.
Agbanyeghị, mmekọrịta ya na The Toffees gbanwere ego ọ na-enweta na about 4 nde dịka nke 2021. Ya mere, anyị na-ewetara gị ngwụcha ụgwọ ọnwa nke God Godrey n'oge edere Life Life.
Kwa Afọ: £ 4,000,000
Ọnwa kwa: £ 333,333
Kwa Izu: £ 76,805
Kwa :bọchị: £ 10,972
Kwa elekere: £ 457
Nkeji nkeji: £ 7.6
Kwa Nke Abụọ: £ 0.13
Nnyocha na-egosi na nkezi nwoke Bekee ga-arụ ọrụ maka afọ 10 na ọkara iji rite ihe Godfrey na-enweta n'otu ọnwa. N'ikpeazụ, anyị ejirila nlezianya tụlee nyocha nke ụgwọ ya dị ka elekere na-akụ.
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Ben Godfrey's Bio, nke a bụ ihe ya na Everton rụworo.
Eziokwu nke 3: Ihe mere o ji họrọ ndị toffe:
Mgbe isonyere Mason Holgate na Everton, Godfrey gosipụtara nwoke ahụ nyeere ya aka ime mkpebi dị oke mkpa.
Dabere na HITC, Okwu Everton Tom Davies bụ agbamume kasịnụ mere Ben ka ọ buru nnukwu ụzọ isonyere ndị Toffeemen. N'ajụjụ ọnụ, Chinekefrey kwuru otu oge;
“Ozugbo m nụrụ ntamu banyere Toffees, ọ bụ m ka ọ gbasara. Ozugbo, enwetara m ọnọdụ nke Davies na-enwe mmasị n'egwuregwu bọọlụ ya ebe a. Ọzọkwa, o mere ka m ghọta na ọ ga-adịrị m mfe ịnabata. ”
Eziokwu nke 4: Goddị Ben Godfrey:
Ee! Ben Godfrey bukwara na inking. O doro anya na ọ chọghị nkwado nke nna ya na nne ya tupu ya egbuo anụ ahụ ya na atụmatụ mara mma nke na-ekwu maka akụkọ ndụ ya.
Lelee egbugbu aka ya na ogwe aka ya. Ọ dịghị ka ọ dị mma mma?
Eziokwu nke 5: FIFA FIFA stats:
Ọ bụ ezie na ọkwa ya gosipụtara atụmanya ka ukwuu karịa nke Emile Smith onye FIFA ji ya nnukwu ụgwọ. Gị abụọ na-eto eto ka nwere ọtụtụ ụzọ ị ga-aga.
Site na FIFA Stats ya, ọ ga-arụ ọrụ na njikwa bọl ya, nhazi ya, na ịwakpo ya iji bụrụ onye nwere mmetụta na ọkwa ahụ.
O nwere ihe na-ekwe nkwa. Naanị ihe ọ ga-eme bụ ịrụsi ọrụ ike ma melite ikike ya.
Oge ụfọdụ, a ga-akwatu anyị ala karịa ka anyị tụtụgoro n'azụ toro ogologo karịa ka anyị na-adị. Ọ bụ n'ihi na Godfrey ghọtara eziokwu a na ọ hapụghị nrọ ya mgbe klọb dị iche iche jụrụ ya.
Ọ dị anyị mkpa ịja ndị mụrụ ya mma (ọkachasị nna ya hụrụ egwuregwu n'anya, Alex) maka ịtụkwasị obi na mkpebi ọrụ ya. N'ezie, mkpebi ha kwere ka Godfrey gbaa bọọlụ emeela ka ezinụlọ ha niile nwee isi.
Lifebogger na-agba mbọ maka ịkwụwa aka ọtọ na izi ezi mgbe ọ na-eke Biography nke Ben Godfrey. Biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị amasị gị gbasara Memoir a.
N'ikwu nke a, tinye okwu iji mee ka anyị mara ihe ị na-eche gbasara kpakpando Atọ nke atọ n'ọdịnihu. Iji nweta nchịkọta ngwa ngwa nke Bio ya, jiri tebụl anyị wiki.
Aha n'uju: Benjamin Matthew Godfrey
aha otutu: Ben
Age: 23 afọ na ọnwa 6.
Ebe amụrụ onye: 15 nke Jenụwarị 1998
Nna: Alex Godfrey
Ezigbo Net: Million 3.5 million (2021 Ọnọdụ)
Rygwọ ọnwa kwa afọ: Million 4 million (2021 Ọnọdụ)
elu: 1.83 m (6 ft 0 na)
Akwụkwọ akụkọ Norwich City
Todd Cantwell Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
Teemu Pukki Childhood Story Plus Nkọwapụta Untold Biography Eziokwu